Uzosebenzisa isipiliyoni sase-Europe uDolly - Ilanga News
Home Ezemidlalo Uzosebenzisa isipiliyoni sase-Europe uDolly
Uzibona ezoba wusizo kwiBafana
UFUNA ukusebenzisa isipiliyoni asithole phe-sheya kwezilwandle nakwiKaizer Chiefs ukusiza iBafana Bafana ingene kwiNdebe yoMhlaba uKeagan Dolly (osesithombeni) oshaya ibuya kuleli qembu.
IBafana izogadulisana neZimbabwe kowokuhlungela iNdebe yoMhlaba namuhla ngoLwesine ngo-21h00, eFNB Stadium, eSoweto.
UDolly kulindeleke enze kahle kwiBafana njengoba esefomini emangalisayo kwiChiefs.
Usanda kuba sematheni eshaya amagoli amabili iChiefs yehlula ngo-2-1 omkhaya i-Orlando Pirates koweligi ngeledlule eFNB Stadium.
Lo mdlali ongowudabuka e-Eldorado Park, eGoli uthi uzizwa ejabule kakhulu ukuphinde abe yingxenye yeBafana.
“Selokhu kuqale isizini sengi-kwazile ukushaya amagoli amane, lokhu kukhombisa ukukhula ebholeni lami.
“Kodwa njengoba ngikwiBafana nje, inhloso wukusebenzisa isipiliyoni engisizuzile ukusiza leli qembu lingene emidlalweni yeNdebe yoMhlaba.
“Kuhle kakhulu ukushaya amagoli ngoba kunyusa nokuzithemba kumdlali nakakhulu ukuwashaya emdlalweni engangifisa kakhulu ukuba yingxenye yawo womkhaya.
“Kuningi engikuzuzayo njengoba ngidlala kwiChiefs kwazise abaqeqeshi engibaficile besazana nabo kuyona iBafana Bafana nokwenza isimo sibe lula.
“Ngiwumqemane, ngiqatha ngokwanele ngingamelana naso sonke isimo engibhekene naso,” kusho uDolly.
Uthi umqeqeshi weBafana uHugo Broos ubembizile emdlalweni wesihle ne-Uganda ngebhadi unkosikazi wakhe wayekade eyobeletha wasamukela lesi sizathu lo mqeqeshi.
Uthi lesi senzo siqinise kakhulu ubudlelwano bakhe nomqeqeshi.
“ Ngikholwa wukuthi lobu bu-dlelwano buzoqhubeka bubenomthelela omuhle kwiBafana Bafana singene kwiNdebe yoMhlaba. Ngizimisele ngokwenza kahle noma ngabe ungidlalisa kuyiphi indawo,” kusho uDolly.
UBenjamin “Benjani” Mwa-ruwari (43) oke waba yibamba lephini kuma-Urban Warriors ngaphambi kokunikwa kukaNorman Mapeza lo msebenzi uthi iBafana ibhekene nomqansa futhi kakufanele iyithathe kancane iZimbabwe kwazise ayi-lweli lutho kulo mdlalo.
Uthi abadlali beZimbabwe abasebancane bazolwela ukuzibeka emlandweni wokuthi ba-shaye iBafana. Uthi baningi abadlali babo abangeke babe yingxenye yalo mdlalo ngenxa yokulimala nezinye izizathu.
Previous articleInja ibulale ingane phambi kukanina
Next articleKunxuswa amaButho ukuyofihla umGilitsha